Ukuhlola i-ghostBSD | Kusuka kuLinux
Alf | | Ukusatshalaliswa, Okunye, Kunconyiwe
Kuthiwani-ke, kungokwemvelo ukuthi lapho othile eqala ku-GNU / Linux, ehlushwa yi-versionitis, kukhona labo abangaqali.
Isibonelo, ngiqale ku-Ubuntu, bengifuna ukwazi okunye ukwabiwa kodwa ngihlala ngihlala ku-Ubuntu, kepha nginike izinqumo ezenziwa yiCanonical ngalolu hlelo, nokuthi kungenzeka ukuthi susa okunye ukufakwa, futhi njengoba ngididekile kancane, kungahle kube ukulahlekelwa yi-minicd, futhi njengoba kade ngenza ukufakwa okuncane isikhathi eside, sengiqala ukuhlola ezinye izinhlelo ukuthi kungenzeka yini zifuduke.
Inketho yami yokuqala i-debian, kepha akukho okwenzekayo kimi uma ngibona ezinye izinketho, enye yazo i-GhostBSD.
Bengifuna ukufaka iFreeBSD isikhathi eside, kepha bengingenalo ulwazi futhi bengifuna ukuthatha isikhathi sokufunda, ngakho ngazitshela ukuthi sekuyisikhathi sokuzama i-BSD.
Ngemuva kwalokho ngiya emsebenzini, ngilande i-GhostBSD-3.0-BETA1-lxde-i386.iso, cishe izinyanga ezimbili, kepha kuze kube manje bengingakayifaki.
Into yokuqala yisikrini lapho sisinikeza khona izinketho zokuqalisa:
Noma sivumela ukuthi i-timer iye ku-zero noma ama-demos ukungena aqala i-cd ebukhoma, uma isiqalile singabona ideskithophu ngaphandle kwezithonjana eziningi kuyo, ngaphezu kokuba nesizinda esijwayelekile se-LXDE.
Lokhu kusatshalaliswa kunezinketho eziningi zokushintsha iphephadonga kunalezo ezinikezwa okunye ukusatshalaliswa nge-LXDE
Yize ngiku-cd ebukhoma kushesha impela, ngangena kwi-inthanethi, isikhashana, futhi ayizange yehlise ijubane nakancane
Ngakho-ke njengoba ngifunde futhi ngibe nencwajana yokufaka yeFreeBSD (ghostBSD isuselwa kuFreeBSD) ngiqale ukufakwa, into yokuqala ukukhetha ulimi, bese kuba ukwakheka kwekhibhodi
lapho ukwahlukanisa ngishiya inketho yokusebenzisa idiski ephelele ngoba yenziwe yaba nhle futhi anginalo olunye uhlelo lokusebenza olufakiwe
uma sehlukanisiwe, sicela idatha yomsebenzisi, iphasiwedi yezimpande, njll.
Ngemuva kwewindi lokuqinisekisa
Lapho sicindezela ukufaka imali efanayo
Ngalesi sikhathi ngibonile ukuthi angisebenzisanga ibhukwana lokufaka, le ngxenye yinde kakhulu, uma isiqedile sicela ukuthi siqale kabusha
lapho siqala kabusha sinesistimu enesici se-LXDE, ukukhanya, hhayi ukulayishwa kakhulu
Mangisho ukuthi ukufakwa kudlulela ngaphezu kokulula, izinyathelo ezimbalwa, umsebenzi omuhle ohlangothini lwabathuthukisi.
Ngesikhathi kuqala i-cd ebukhoma nohlelo olufakiwe, kunenqubo ethi okungaphezulu noma okuncane okungu-8 ngenxa yejubane, angikwazi ukulifunda kahle) ukumiswa kokungenantambo komshayeli, kunginika ukuthi anginakho, kepha kuzoba ngoba ngiku-virtualbox, angazi.
Umbono wokuqala engiwutholile ngesikhathi sokuhlolwa nokufakwa kwenqubo muhle kakhulu,
Lokhu kuyindlela enhle kunoma imuphi umsebenzisi oqala ngokukhathazeka ngokubheka izinketho kuMswindows.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ukuhlola i-ghostBSD
USergio Esau Arámbula Duran kusho
Yebo, isifaki asibukeki sinzima, ingabe siyagingqika noma sisatshalaliswa kanjani futhi sibuyekezwe kanjani?
Phendula uSergio Esaú Arámbula Durán
Yeka ukuqondana kwezinto, bengilanda iGhostBSD njengamanje ukuyivivinya futhi ngithole le ndatshana xD
Kuyangishaya ukuthi ngisebenzise enye ye-BSDs (i-freebsd ukucacisa) kepha ngifuna ukwazi ukuthi ama-BSD ahlangana kanjani nama-PC, okusho ukuthi, yini umehluko nge-ArchLinux (eyi-distro engikuyo njengamanje), ukuthi isebenza kanjani noma abanye. Umbuzo uvela esihlokweni engisifundile (angikhumbuli ukuthi sikuphi) esisho ukuthi i-BSD ifana kakhulu ne-UNIX ekhona nokuthi iLinux kunalokho ivela ku-UNIX, ngakho-ke ngesaba ukuthuthela ku-BSD
Ama-BSD akuyona into esondele kakhulu ku-UNIX, ukuthi yi-UNIX. Zitholakala ngqo.
Sanibonani notfrombroklyn noRots87 !! Endabeni ye-BSD, akukhona ukuthi zithathwe ku-Unix, ukuthi "BAYI" isisekelo se-Unix, inani elikhulu lekhodi yokuqala yalokho okwakuyi-Unix yathuthukiswa yiYunivesithi yaseBerkley nokuthi ngokuhamba kwesikhathi Eqhamuka ku- "ngubani ongumnikazi wayo", uBerkley wethule okwehlukile ngokuya ngekhodi abazithuthukisa yona futhi yabhalwa kabusha ngaleyo ndlela ezalwa yi-BSD ... kahle, yilokho engikwaziyo.
Ngokuqondene nokufana nokwehluka kweLinux, kucatshangwa ukuthi esingakwenza ngeLinux kufanele sikwazi ukukwenza nge-BSD, yize kufanele siciphise okuningi, ngoba mhlawumbe kufanele sihlanganise isoftware eningi ngesandla. Lapha ngibona izinketho ezi-2 zokuqala nge-BSD, eyokuqala, kulokho abavela ku-linux mhlawumbe kungaba ukufaka i-Debian kBSD, yize kulokho engikubonile ukufakwa kwayo kunzima kakhulu kunalokho okwethulwe ngu-Alf namuhla lapha eGhostBSD, okwesibili kuzoba ukuhlola Izinhlobo ze-BSD "zabantu nje", ngezwa kanye kusuka ku-DragonFly, kepha namhlanje ngibona okuningi "okufayo" lokhu okuvela eGhost.
Ngingaluleka ukuthi senze lokho abaningi bethu abakwenzile lapho sifunda ngeLinux, sisebenzisa i-LiveCD, sibone ukuthi iziphatha kanjani, mhlawumbe ukufaka umshini obonakalayo futhi kahle, uma kusiqinisekisa ukuthi siphume kakhulu… «ukufakwa !!!
Sanibonani futhi ngithemba ukuthi le datha iyasebenza !!
Kumele ngivume ukuthi * i-BSD ngumsebenzi osalindile enginawo, owenzeka ngenxa yeqiniso elilula lokungabi nayo ikhompyutha yami, nokuthi kufanele ngilondoloze idatha yami ngenxa yenkinga yokushintsha kweFayile System, ngoba ingenza ngime.
Yebo, iFreeBSD iyindlela enhle futhi kufanele kube uhlelo olungafanele luphuthelwe noma iyiphi i-Unixero, bengilusebenzisa isikhathi eside futhi luhle kakhulu, kuphela amaphakheji aphelelwe yisikhathi eduze kokusabalalisa kweLinux okudume kakhulu
Mina, njengo-elav, anginikelanga isikhathi esifanele ku-BSD, kepha ngiyethemba ukuthi ngokukhishwa kwe-Debian kBSD namaphakeji ayo anezinhlobonhlobo eziningi nalokhu okuthunyelwe okuvela ku-Alf akusikhuthazi mina kuphela, uma kungenjalo abantu abaningi, ngisho nokwazi ...
Ngethemba ukuthi i-hackloper775 ifuna ukwaba okuningi mayelana nokuhlangenwe nakho kwakho ne-BSD, kusukela lapho uyisebenzisa, ubuhle nobubi obukade unabo neziphakamiso zakho mayelana ne-BSD
Khourt, ngike ngazama i-Debian kfreebsd. Abantu abaningi bayayithanda, ngaphoxeka. Bengifuna ukuzama iFreeBSD isikhathi eside, kepha angikenzi isinqumo okwamanje.
Ube nezinkinga zini? Sitshele, ngoba bekuyinto obufuna ukuyizama 🙁
Yebo Yebo Yebo !! Sitshele, yini eyakudumaza (bona ukuthi benginethemba elikhulu ...)
Ngiqonde ukuthi, mhlawumbe ngizozama, kepha ukubukezwa okuvela kumuntu osevele ekusebenzisa, sengizokwazi ukuthi ngibhekene nani
kimi kuyafana. Ngizamile ukufaka i-PCBSD neFreeBSD, kepha kuzo zombili lezi zimo ukwethuka kernel kungivimbele ukufaka uhlelo. Ngibheke izinkundla ezisemthethweni kaningana ngacwaninga inetha, kepha angikaze ngisithole isisombululo. ngokusobala iBSD ayihambelani noDell wami.
Ummm, ake siyilande futhi sibone ukuthi kuhamba kanjani!
Ngafaka ezinsukwini ezimbili ezedlule kumshini obonakalayo we-PC-BSD 9.0 Isotope, ukufakwa okulula futhi kukunikeza ithuba lokufaka izindawo ezahlukahlukene zedeskithophu nezinye izinsiza ezifana ne-samba, angikabi naso isikhathi sokuphikisana nayo okwamanje,
kepha ngifuna imininingwane nge-BSD angitholanga imibhalo eminingi ngeSpanishi
Bengizokhuluma nge-PC-BSD, ebukeka ilula kakhulu kunale yeGhostBSD. Usuvele uneso kuso? http://www.pcbsd.org/es/
Ngokuzenzakalelayo ine-KDE, yize inezinye izindawo njengoba uDavidlg asho, futhi ukufaka uhlelo kulula njengokulanda okusebenzayo endaweni yayo yokugcina, bese uchofoza Okulandelayo -> Okulandelayo.
Ngizamile kudala futhi ngiyavuma ukuthi ngamangala ngokusebenziseka kwayo kalula.
Mayelana nama-BSD, okungikholisa kakhulu yi-PCBSD, kepha-ke, uma ngifaka okuthile ngidinga yonke i-hardware yami ukuxhasa zombili ihluzo ze-Intel ne-Wi-Fi (futhi akubonakali kuyisudi yayo eqinile).
Ama-BSD kuseseyiminyaka elula ukusuka kunoma iyiphi i-GNU / Linux maqondana nokusekelwa kwedeskithophu yemultimedia kanye nehardware ye-esoteric, kufanele ube nesizathu esicace bha sokusebenzisa i-BSD futhi kulokhu kuzokwenzeka ngenxa yesinye se-FreeBSD esuselwe (Vula , Net, DragonFly, njll.) Ngoba akunangqondo ukusebenzisa i-FreeBSD ngaphandle kokuthi umuntu adinge i-ZFS nge-distro enkulu ye-GNU / Linux laphaya! 😀
Noma faka iseva !! Njengoba sazi, i-BSD ibonakala ngokuhlinzeka ngokuphepha okukhulu, ikakhulukazi i-OpenBSD, noma bekuyiNetBSD ??? Bekufanele ngibheke ukuhlaziywa kwezokuphepha kwanamuhla.
Futhi njengoba i-BSD isahamba iminyaka, ngizokutshela kuphela ukuthi kucatshangwa ukuthi ikhodi efanayo yomthombo wezinhlelo zokusebenza eziningi ingahlanganiswa ku-BSD, noma kunjalo, umsebenzisi wokugcina usebenza kakhulu ku-Linux
Ungenze ngakhumbula lapho ngisebenzisa i-FreeBSD encane (yiziphi izikhathi) xD
I-athikili enhle. Ngizamile i-pc-bsd inyanga engu-1 futhi ngiyithandile, kepha ukufakwa kuyinto endala. Ngaphandle kwalokho izwa ngokushesha, uketshezi, izinzile futhi kulula ukuyisebenzisa. Ngiyethemba kunezinhloko eziningi ezifana nalezi.
I-BSD inconyelwa ukufaka amaseva, kubasebenzisi nayo ingasetshenziswa kepha inokusekelwa okuncane kakhulu kune-linux esigabeni sokuyisebenzisa njengohlelo lwedeskithophu. Bengivivinya i-pc-bsd futhi yize ibukeka njenge-linux, ayifani, ngoba isebenza ngokuhlukile kwezinye izici. Noma ngabe uvela eLinux, kufanele ube nesikhathi esihle sokuyifunda.
Ngiyabonga Alf, ngemininingwane, ngizobe ngilandela amanothi akho ukuthi i-BSD yakho iziphatha kanjani, futhi kuhle ukuthi asihlali eLinux kuphela, ngoba kufanele sazi ukuthi kukhona umhlaba ongaphandle kweGNU / Linux okufanele siyazi, i-BSD, i-Indiana, iMinix ...
Uma ungangitshela ukuthi i-GhostBSD vs DragonFly ne-Pc-BSD zihamba kanjani
-Khourt Uma ungangitshela ukuthi i-GhostBSD vs DragonFly ne-Pc-BSD zihamba kanjani, -
Ngeke ngiqhathanise ama-distros ne-classic xxx vs xxx, ngoba ukusatshalaliswa ngakunye kunokwakho.
Engingakwenza kunoma ikuphi ukukhombisa ukuthi le nqubo ilapha kanjani, ngiphawule ukuthi ibibonakala kimi, futhi ikakhulukazi ngithi uma ngizoqhubeka nokuyisebenzisa, ngoba wonke umuntu angayisebenzisa futhi azenzele iziphetho zakhe mayelana nokuthi kukhululekile yini ukusebenzisa i-distro eyodwa noma enye.
Ukuxolisa ngamaphutha esipelingi, ngoba ikhibhodi yahlala ngaphakathi angazi ukuthi yiluphi ulimi futhi angikwazi ukuthola amagama.
Ukuxolisa u-Alf, futhi kube yimpumelelo enhle nokucacisa i- "versus", kuphela ukuthi bengibhekisa kakhulu ekuqhathaniseni okusebenzayo, ngokwesibonelo ngingaqala ngokufakwa okulula okwethule eGhost, kuqhathaniswa neFreeBSD 8 (okuyiyona Ngikuhlolile kwenza isikhashana), noma imodi yombhalo we-Debian kBSD ... nenye, siyazi ukuthi amaphakheji aphelile, kepha kuthiwani ngokuhlanganiswa? Ngabe iyafana ncamashi neLinux? Ngikhumbula ngokwesibonelo inkinga ebenginayo nephakheji kudala eyacela ukuthembela ku- "XFree86" noma into enjengaleyo, engicabanga ukuthi kwakuyinguqulo yakudala yeXorg ... ulwa nalena ?? Futhi-ke futhi kuthiwani ngokufaka abalawuli? Ukuthi imithombo kufanele isebenze ... nakho konke esivele sikwazi ngombono, kepha kuthiwani ngokwenza ???
Ukubingelela nokubonga ngempendulo esheshayo
Ku-virtualbox kuhamba kahle, inkinga ifika lapho ifakwa emshinini wangempela, kuyiqiniso ukuthi nge-nvidia okungenani i-pc-bsd ayisebenzi kepha ama-int noma ama-intels ayisudi yayo eqinile nokuthi ngaphandle kokukhuluma nge-wireless, ngethemba ukuthi ungasebenzisa Abashayeli beWindows abanaleyo nto enhle engusgen kodwa, ngithe, ngethemba. Ngaphandle kokungabaza, i-BSD igxile kakhulu kuseva kune-desktop, yize i-pc-bsd ne-ghostbsd benza umzamo omkhulu wokwenza izinto zibe lula.
Ngokwami ​​ngiyayithanda i-pc-bsd kakhulu, ikuvumela ukuthi ube nobhiya ngezikhathi ezithile. Kuyiqiniso ukuthi ine-app-café kodwa futhi inamachweba ezinsuku esivuka ngazo sifuna ukusebenza kancane. Ngiyethemba ukuthi le misebenzi izohlala njalo.
I-athikili enhle. Iqiniso ukuthi angisazibandakanyi nolunye uhlelo olusebenzayo. Ukuthuthela kwiLinux kwakusivele kuyinkimbinkimbi ngandlela thile ukuvusa izinto ekhanda lami futhi.
Yebo, uma ume ukucabanga ngakho, akuzona, eziyinkimbinkimbi kangako, ngoba ukuqala ngomqondo oyisisekelo kufana kakhulu ne-GNU / Linux, amadeskithophu afanayo, i-KDE, i-Gnome, i-LXDE, i-E17, ne-WinManger nayo, i-OpenBOX , Flux, RazorQT,… .etc futhi ngokuyisisekelo nayo inezinqolobane, nohlelo ongalutholi ngoba uyalihlanganisa (okungenzeka ukuthi yilokhu okungenza izinto zibe nzima). Le nto i-adventure nokwazi uhlelo, ukwakheka kwayo, ifomu kanye namathuluzi, kepha njengoba ngishilo ngaphambili, singakuzama kusuka ku-Live CD nasemshinini obonakalayo, futhi uma siyithanda, wonke umuntu uyanquma.
Uma ubucabanga nange-debian engqondweni, ungazama uDebian gnu / kfreebsd
Ngelinye ilanga ngizozama i-BSD, angicabangi ukuthi ushintsho lunzima kangako, kepha kumodi ye-console izinguquko kufanele zibongwe kakhulu. Ngokuthola okwengeziwe ithuba lokuHlela 9, lokho kuzoheha 🙂
Ukubingelela nokubonga ngale ndatshana. Imininingwane eyodwa kuphela engabelana ngayo: isenzo sokuveza ukuthi okuthile "kubambezela" akuyona "ukukhuthaza" (njengoba uyisebenzisa ku-athikili yakho) kodwa KULULA futhi KUKHULU. 😉
Ngabe kuzokhuthaza ukwehla?
Ngiphinde ngahlushwa i- "versionitis" futhi ngazama ama-distros amaningi ngaphambi kokuthatha isinqumo sokuvumela i- "Güin2" ingazami i-BSD, inketho yami yokugcina nokuthi umshini wami ophathekayo "izimpukane" yi-LM-13-KDE-64 ene-kernel 3.5.3 no I-KDE 4.9.0 ngiyishiye njenge-OS kuphela
Ngiyincoma kubaqalayo abanjengami.
Okwamanje ngisebenzisa ubuntu ngobuvila futhi ngihlela ukubeka izimbungulu zeminnetbook ngezizathu zomsebenzi kepha ngiqhathanisa i-ghostbsd ne-pcbsd ukufaka encwadini yami ye-neetbook lapho ngibona ukuthi iyiphi ekwazi ukukhomba konke engikuthathayo njengekhadi elingenantambo elihlanganisiwe elibi; Yebo, yize ngiqale kwiLinux njenge-debianite efanelekayo futhi kamuva njenge-slackero efanelekayo (i-slackware yayiyi-x3 enhle), ngazi i-OpenBSD ne-freeBSD futhi ngathandana, ngafika eqophelweni lokubeka i-OpenBSD kwi-pc yami nohhafu ukuphatha ukuyibeka njengohlelo lwedeskithophu nakho konke ne-multimedia futhi ngafaka i-freeBSD kumkhulu wami isikhashana, bekuhlekisa ukubona ukuthi singenza kanjani cishe lutho yize ngamaviki obuhlakani ngikwazile ukufana kakhulu amawindi akhe xDD. Ngingu-OpenBSDero futhi ngi-freeBSDero enhliziyweni> u <, ngendlela i-OpenBSD esekwe ngayo kwi-NetBSD ne-DragonflyBSD ngiyaqunga ukusho ukuthi kunzima kakhulu kune-openbsd ebandlululwe kangako ngoba izosebenza ngezindawo zokubeka i-HD kukhompyutha, i-inthanethi kokunye futhi kanjena: P. Sanibonani kubuntu bami obubi obonakele futhi ngiyaxolisa ngamaphutha esipelingi kodwa ngu-1.12 ekuseni futhi ngomsebenzi ngishaya ikhibhodi ...
kufanele ubone kucacisiwe ukuthi zonke izinhlelo ze-bsd akuyona i-gnu / linux, ngoba abanye abantu bangadideka
UJose Fernando Ayala kusho
Yebo, njengamanje nginawo injoloba ye-ArchBsd, kuhle ngaphandle kokuthi iyagudluka sicela, kepha ngibambekile, angiqondi lutho, ngingumsebenzisi we-linux kodwa kahle, njengamanje ngikulokhu uma othile efuna ukunginikeza isandla sokwamukela, kungaba njalo ngoba ngokwesibonelo angikwazanga ukufaka i-terminator, thina bheka laphaya bye
Phendula uJose Fernando Ayala
Ngendlela, inguqulo entsha ye-GhostBSD 4 RELEASE isiphumile, yinhle kakhulu.
I-Asus EeePC 1201HA yami endala ene-2Gb ye-RAM yayihamba kancane ngeWindows 7, futhi nayo yashisa. Ngizamile iWindows 8.1 futhi angikholwanga, yize bekukhanya kancane. NgeLinux kunenkinga futhi ukuthi izinhlobo ezintsha ziya ngokuba nzima. I-Linux mint iyeke ukuba wusizo kimi. Ekugcineni, ngokufaka i-Gosht BSD 4.0, iqembu lami lavuselelwa. Kuza nobuncane obungenalutho obudingekayo. Angikacacisi ngezinqolobane, kepha okwamanje angikudingi nami. Udaba olulodwa ukuthi kufanele uhlele ukufunda amafayela we-NTFS, noma ifunda ukwahlukaniswa kwe-FAT kahle. Umbono wami ukuthi uqinile futhi uzinzile. Kungikhumbuza kancane ikhompyutha yokuqala enganginayo, iMacintosh LC-III.
Isexwayiso: Noma kuyi-UNIX imiyalo ayifani nakuLinux. Usizo lwe-command console lungile.
UFabian Rattoni kusho
I-BSD akuyona i-linux, iyi-UNIX
futhi awabizwa ngama-Distros noma ama-Distribution.
zingamasistimu wokusebenza aphelele.
Ngokungafani nokusatshalaliswa kwe-Linux yiKernel (i-Linux uqobo) kanye nezinhlelo zezinhlelo eziqoqwe endaweni, i-BSD uhlelo oluthuthukiswe ngokuphelele
Phendula uFabian Rattoni
Ngisanda kushiya ubuntu 18.04, nokufakwa okuhlulekile kwamawindows 10 dr lite, ngivivinya iGhostbsd, iqiniso ukuthi ngifaka ngokushesha bukhoma, bese ngiyabona ukuthi kukhanya kudiski, ku-Dell Gx 680 optiplex, ama-gigs amathathu enqama usilika, one-firefox, izingcezu ezingama-3, ngicabanga ukuthi kumele undize emishinini emisha! Ngesikhathi sokugcina lapho ngazama into efanayo kwakungu-freebsd ngo-64, sizobona uma sihlala, ukuthi uma amanye amadiski engingawaboni, wona zikwezinye izinhlobo ...
Ungazibulala kanjani izinqubo kalula
Khubaza i-Touchpad ku-KDE ngenkathi ubhala